मधेशबादी दल राजपाको रिमोट कसको हातमा ? भारतीय बिदेशमन्त्री स्वराज काठमाडौं आएपछि एकाएक राजपा चुनावमा आउन तयार « Light Nepal
मधेशबादी दल राजपाको रिमोट कसको हातमा ? भारतीय बिदेशमन्त्री स्वराज काठमाडौं आएपछि एकाएक राजपा चुनावमा आउन तयार
काठमाडौं, २८ साउन । राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले संविधान संशोधन विधेयक मतदानमा लैजाँदा जस्तो परिणाम आए पनि त्यसलाई स्विकारेर चुनावमा भाग लिने सहमति गरेको छ। यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ।
असोज २ मा हुने प्रदेश २ तथा त्यसलगत्तै हुने प्रदेश र केन्द्रीय संसदका चुनावका लागि राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्न यो सहमतिलाई दुवै पक्षले ऐतिहासिक मानेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले बिहीबार स्थानीय तहको संख्या बढाउन सरकारलाई बाटो खोलिदिएपछि शुक्रबारको बैठकमा राजपाका नेताहरूको प्रस्तुति नरम बनेको थियो। स्थानीय तहको संख्या थप्ने सरकारको यसअघिको निर्णय सर्वोच्चको आदेशले कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।
सरकारले यसअघि मधेसका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाएको थियो। तीमध्ये प्रदेश ५ अन्तर्गत पर्ने ३ जिल्लामा चुनाव सम्पन्न भइसकेका कारण अब प्रदेश २ का ८ जिल्लामा बढाइएको संख्या मात्र कायम हुने पनि दुई पक्षबीच समझदारी भएको छ।
सत्ताघटक कांग्रेस, माओवादी र राजपाका नेताहरूबीच आगामी मंगलबारको बैठकमा नै संविधान संशोधन विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने समझदारी बनेको छ। सरकारसँग समझदारी भएपछि राजपाका नेताहरूले शुक्रबारै निर्वाचन आयोगमा पुगेर पार्टीले तय गरेको छाता चुनाव चिह्न माग गरेका थिए।
बिहीबार बेलुकाको भेटमा भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले राजपा नेताहरूलाई चुनावमै जानुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन्। ‘इम्पोज त थिएन तर चुनावमै जानुपर्ने सुझाव उहाँ स्वराजबाट आएको हो,’ राजपा अध्यक्षमण्डलका एक सदस्यले भने, ‘चुनावमै जान हुन्न भन्ने साथीहरूलाई पनि सायद त्यही सुझावले नरम बनायो।’
राजपाको हालै सम्पन्न पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले यथास्थितिमा चुनावमा जान नहुने निर्णय लिए पनि राजपाभित्र चुनावमा जानुपर्छ र जान हुन्न भन्ने पक्षबीच विवाद चुलिँदै गएको थियो।
माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान संशोधन पारित भए पनिरनभए पनि राजपा चुनावमा आउने बताए। ‘असोज २ र त्यसपछि हुने प्रदेश र संघीय संसदको चुनावका लागि पनि यो सहमति कोसेढुंगा सावित भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो सकारात्मक बाटो हो।’
राजपा नेताहरूले भने संविधान संशोधन पारित हुने सुनिश्चित आधार देखेकै कारण निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने सहमति भएको बताएका छन्। बैठकबाट निस्केलगत्तै राजपा नेता शरदसिंह भण्डारीले संविधान संशोधन दुई तिहाइ मतबाटै पारित हुने बताए।
‘दुई तिहाइबाट पारित हुने आधारहरू देखिएका छन्,’ पारित नभए चुनावमा जानु हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा भण्डारीले भने, ‘संशोधन विधेयक पारित नै भएर छाड्छ।’ राजपा महासचिव केशव झाले भने दुई तिहाइबाट पारित भए पनि नभए पनि राजपा चुनावबाट नभाग्ने बताए।